Gedo - Wikipedia
Gedo (Af Ingiriis : Gedo, ) waa gobol ka tirsan wadanka Soomaaliya, kaasi oo looyaqaano Jubada Sare waxuu dhacaa xadka wadanka Kiinya, iyo I Ethiopia Gobolka Jubada sare waxaa magaalo madax u ah magaalada Garbaharrey
Sida ku xusan taariikhda dadka Soomaalida gobolkan waxaa la aasaasay wakhtigii 1980maadkii waxaana xad la leeyahay deegaanada Soomaali Galbeed ee wadanka Itoobiya, Gobolka Waqooyi Bari ee Kenya, iyo gobolka Bakool, Baay, Jubbada Dhexe, iyo Jubbada Hoose.
Gobalka Gedo waxa uudhacaa koonfur galbeed soomaaliya. Gedo waa Gobalka labaad ee ugu weyn Soomaaliya wuxuuna ku xigaa Gobalka bari. waana Gobalka kaliya ee kamid ah Gobalada Soomaaliya ee Xadka la leh labada dal ee Kenya iyo Ethiopia. Gedo waxay ku jirtay deegaanada Soomaaliyeed ee nooca walba ula dagaalamay ; gumeystihii reer Yurub.
Gobolka Gedo waxaa ka dhisan nidaamyo waxbarasho walow aysan jirin dalad midaysa iyo Gudoon Waxbarasho oo heer degmo ama gobol ah.
Magaalooyin madaxda degmooyinka Gobolka Gedo sida Bardhere, Garbaharrey, Luuq Garb jira dugsiyo waxbarasho oo leh heerar kala duwan. Magaalada Bardhere waxaa ku yaal Jaamacada Gedo iyo Kulyada Farsamada Bardhere ee Bardera Polytechnic.
Ururo waxbarasho oo dadaal muuqda ka wada gobolka ayaa waxay maamulaan iskuulo leh heer hoose/dhexe ilaa sare. Waxaa ururadaas ka mid ah HIRDA, SEHO, G.E.D.O, iyo Markaleey Foundation.
Magaalooyinka Gobolka Gedo
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Gedo&oldid=212235"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 5 Juun 2021, marka ee eheed 07:47.